March 19, 2020 - MM Live News
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မှ လက်ရှိကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ငွေကျပ် သိန်းတစ်ရာ တိတိ လှူဒါန်းမူအတွက် ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည် ဘုရား ။ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ ။ နတ် လူ သာဓု ခေါ်စေသော် ။ Aung Kyaw Myo Unicode ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျောဘုရားကွီး မှလကျရှိကပျရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးအတှကျကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနသို့ ငှကေပျြ သိနျးတဈရာ တိတိ လှူဒါနျးမူအတှကျ ဝမျးမွောကျနုမျော သာဓု သာဓု သာဓု ချေါဆိုအပျပါသညျ ဘုရား ။ ဆရာတျောဘုရားကွီး သကျတျောရာကြျော ရှညျပါစေ ။ နတျ လူ သာဓု ချေါစသေျော ။ Aung Kyaw […]
ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ၆ တန်းကျောင်းသား နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ၍ မိဘများမှ ပြည်သူများထံ အကူအညီတောင်းခံ မတ်(၁၉) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပြည်သူ့ကူညီရေး ပြည်သူ့အသံဖော်ဆောင်ရေး သတင်းမှန်မီဒီယာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်နေသူ ဦးတင်မောင်ထွေး၊ ဒေါ်ရီရီမြင့် တို့၏ သားဖြစ်သူ (ပျောက်ဆုံးစဉ် အသက်) (၁၁) နှစ် ၆ တန်းကျောင်းသား မောင်စွမ်းဇော်ဇော် နှင့် ၄င်းရပ်ကွက်နေသူ ဦးမိုးသီအောင် ရဲ့ သား မောင်မြင့်မြတ်မိုး (ပျောက်ဆုံးစဉ် အသက်) (၁၂) နှစ် ၆ တန်းကျောင်းသား မောင်မြင့်မြတ်မိုး နှစ်ဦးသည် မုံရွာမြို့ ဆူးလေကုန်းရပ်ကွက် အထက(၃) မုံရွာ သို့ ကျောင်းတက်ရာမှ (၈.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စတင်ပျောက်ဆေုံးနေပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ပြန်လည်မတွေ့ရှိရသေးကြောင်း မိဘများထံမှ သိရပါသည်။ အဆိုပါ […]
လမ်းမြေယူလို့ ပြိတ္တာဖြစ်သွားသူ အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်လေး( ဖတ်ကြည့်နော်…) မြန်မာပြည် မြေလတ်ပိုင်းမှ ရွာလေး တစ်ရွာမှာ…လယ်ပိုင် ယာပိုင် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။လောဘကလည်း အလွန်ကြီးသတဲ့။ ဒါကြောင့်…သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနှင့် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ သူ့ယာခင်းနားက လူတွေနှင့်လည်းမကြာခဏဆိုသလို စကားများကြတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မြေချဲ့ချင်တဲ့အတွက် သူဟာ လမ်းမြေကို တဖြေးဖြေးနဲ့ ဖဲ့ယူသတဲ့။ အရင်တုန်းက လမ်းက လှည်းနှစ်စီး သွားလို့ ရပေမဲ့အခုကျတော့ သူ ယူလိုက်တဲ့အတွက် လမ်းက ကျဉ်းပြီးလှည်းတစ်စီးပဲ သွားလို့ရပါတော့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့…အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ ရောဂါ အသည်းအသန် ဖြစ်ပြီး အမေ ကယ်ပါ….အဖေ ကယ်ပါ ဆိုပြီး အော်ဟစ် ငြီးငြူသတဲ့။ နောက်တော့…အဲသလို ငြီးငြူရင်းနဲ့ပဲ သေဆုံးသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက် သိပ်မကြာပါဘူး။သူ့ရွာက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးပါလေရော။ လမ်းမြေယူထားတဲ့ အတွက် သူ့ယာခင်းနားမှာ မကျွတ်မလွတ် […]
March 19, 2020 March 19, 2020 MM Live News
ဘုန်းကျက်သရေ လာဘ်ပွင့်် ဦးခေါင်းမင်္ဂလာ ပြုရအောင် အားလုံးမင်္ဂလာပါအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချစ်ခင်လေးစာကြသောမိသားစုဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ မနှစ်ကတကြိမ်ရေးသားထားသလို မြန်မာနှစ်ရဲ့ပထမလ ဖြစ်တဲ့တန်းခူးလဆန်း၁ရက်နေ့မှာဦးခေါင်း ဆေးမင်္ဂလာပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်…. ရှေးဆို ရိုးစကားလေးနဲ့အညီ ဆန်းရက်၁ရက်မှာ ဦးခေါင်ဆေးရင် ဘုန်းကျက်သရေမဂ်လာ တိုးပွားပြီ လာဘ်ပွင့်ခြင်း …. ကံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာတွေတိုးပွားကြခြင်းအန္တရာယ် ကင်းခြင်းဆိုသည့်အတိုင်း….ယခု တန်ခူးလဆန်း၁ရက်နေ့ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်…. အဲ့ဒီနေ့မှာ နေ့လည်၂နာရီမှ ညနေ၅နာရီ အချိန်တွေမှာမြန်မာ့ရိုးရာ တရော်ကင်းပွန်းရည်စစ်စစ်ထဲကို ကွမ်းရွက်၃ရွက်ခြေထည့်ပါ…. သပြေ၃ညွန့်ထည့်ပြီ မိမိတို့ဂြိုလ်ခွင်အလိုက်လာဘ်နေအရပ်ကို မျက်နှာမူပြီ ဦးခေါင်းဆေးမဂ်လာပြုပေးရပါမည် ။ ဦးခေါင်ဆေး မင်္ဂလာပြုချိန်မှာ ဖိနပ်ချွတ်ပြီးလာဘ်နေ အရပ်တွေကိုမျက်နှာမူကာ မိမိစိတ်ထဲမှ သရဏဂုံ ရွတ်ဖတ်ခြင်း ပဌာန်းအကျဉ်း၃ ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပြီးပါကဦးခေါင်ဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်ရပါမည်။ နေ့နံသား သမီးများလာဘ် နေရမည့်အရပ်များမှာ…. တနင်္ဂနွေ မွေးသူများ မြောက်အရပ် တနင်္လာမွေးသူများ အရှေ့တောင်အရပ် အင်္ဂါမွေးသူများ အနောက်အရပ် […]